नगरकोट । चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोट प्रवेश गर्ने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालेपछि पर्यटन व्यवसायीले पर्यटकसँग शुल्क नलिइ व्यवसायीसँग लिनुपर्ने बताएका छन् । नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासक...
काठमाडौँ । यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर सेक्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । विबाहिताले गर...
हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौन उत्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले य...
चौबिसै घण्टा भोक लाग्ने यो कस्तो रोग !
दक्षिण अफ्रिकी ३५ वर्षीया जोलाका १० वर्षीय छोरो क्याडेन बेन्जामिनको वजन ९० किलो ! तीन वर्षको उमेरमै ४० किलो भइसकेका । प्रायः सबैले बढीमा एकदिन तीन छाक खान्छन् तर म्पुमालान्गा निवासी क्याडेनले हरेक घण्...
प्रेमिकाको यौनांगमै फेभिकोल पोखाइदिएपछि….
प्रेमिकाको यौनांगमा फेभिकोल पोखाइदिने ४६ वर्षीय मार्क लेस्टरले १६ महिनाको निम्ति जेलको हावा खान पुगेका छन् । मार्क ब्रिटेनका हुन् । शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा झगडा भएपछि प्रेमिकामाथि कुटपिट गरे...
पिउनुहुन्छ सर्पको रगतको जुस ?
सर्पले काटेपछि पानीसम्म खान भ्याइँदैन भनिन्छ तर इण्डोनेसियामा जताततै त्यही सर्पको रगत जुससरह पिउने चलन छ । हुँदाहुँदा अहिले आएर सर्पको रगत पिउने पसल खुल्न थालेको छ । राजधानी जकार्तामा यस्तै पसल साँझको...
भारतमा चुनावका लागी टिकट विवरण हुने समय नजिकिँदै गर्दा एक कांग्रेस नेताको अश्लिल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यसरी चुनावको मुखमा कांग्रेस नेताको भिडियो सार्वजनिक भएपछी कांग्रेसको राजनीतिमा धक्का लागेको छ...
सामान्यतः आमा–बाबुको सामु मैथुन त के यौनजन्य कुराकानीसमेत गरिँदैन । तर, अमेरिकाका दुईजना पोर्न कलाकारले भने आमाबाबुसरहका वृद्ध जोडीलाई मैथुनका आसनहरु सिकाउन थालेका छन्, त्यो पनि मातृदिवसको सन्दर्भ पार...
धनी पूरुषलाई सुन्दरताको जालमा फसाएर फाइदा लिने टेलिभिजन प्रस्तोता
सुन्दरताको फाइदा उठाएर युवतीले कसरी पुरुषलाई आफ्नो जालमा फसाउँछन् र नाजायज फाइदा लिन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन् कोलम्बियाकी पूर्व टेलिभिजनकर्मी पाउलिना करिना डियाज । २७ वर्षीया डियाजलाई ह...
प्रायजसो पुरुषको तुलनामा अधिकांश महिलालाई चरमसुखको स्थितिमा पुग्न केही बढी समय लाग्छ । कतिपय दम्पतीले यौनसम्पर्कको सुरुआत नै एकै पटक योनिमा लिङ्ग प्रवेशका साथ गर्छन् । यसो गर्नाले पुरुÈ तथा महिला यौनप...
यो सत्य हो कि महिलाहरुलाई बुझ्न अप्ठेरो छ ।, तर जब आफ्नो भावना र इनर फिलिंग (भित्रि इच्छा) व्यक्त गर्ने कुरा गर्छन तर त्यहाँ शब्दहरुको सट्टा नन भर्बल कम्यूनिकेशन अर्थात इशाराको प्रयोग गर्छन् । यस्तो...
न्युयोर्कमा सयौं पर्यटकहरुको हुलका कारण धेरै मानिसहरु मुख बाउन बाध्य भएका छन् । कम्तीमा २०० नग्न मोडलहरु टाइम्स स्क्वायरअघि भेला भएर आफ्नो नग्न शरीरमा अनेकौं कुरा पेन्ट गरेर समानताको वकालत गरेका छन् ।...
एजेन्सी ।कुकुरलाई एकदमै बफादार जनावरको रुपमा लिने गरिन्छ । तर कोरियामा यस्तो एउटा बफादार कुकुर भेटिएको छ जसको बारेमा सुनेपछि तपाइहामीलाई कुकुरप्रति अझ बढी माया ममता र सद्भाव बढ्ने निश्चित छ । तस्विरमा...
मालिकनीसंगै कुकुरले यसरी गर्छ योगा (हेर्नुस भिडियोसहित)
कुकुर एक घरपालुवा जनावर हो अनि वफादार पनि । यसलाई एक सच्चा सिपाहीको रुपमा पनि लिइन्छ । कुकुरले विभिन्न चामत्कारिक काम गरेको त हामिले सुन्दै आएका छौै अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुकुरको एक फरक किसिमको भिडिय...
महिलालाई मोबाइल मनाही !
भारतको उत्तर प्रदेशको मडोरा नगरमा ज्येष्ठ नागरिकले महिलाले घरबाहिर जाँदा मोबाइल बोक्न नपाउने अनौठो नियम जारी गरेका छन् । मोबाइलमार्फत अविवाहित युवतीले पुरुषसित सम्पर्क गरी शारीरिक सम्बन्ध जोड्ने गरेको...
गर्भवती महिला पुनः गर्भवती
मानव जातिको इतिहासमा कहिलेकाहीँ अपत्यारिलो र दुर्लभ घटना हुन्छन् । यस्तै दुर्लभ घटना एक बेलायती महिलाको जीवनमा भएको छ । जोलेनी ब्रोडका अनुसार उनले गर्भवती भइसकेपछि पुनः अर्कोपटक गर्भधारण गरेकी हुन्...
कस्तो ज्याद्रो जोडी !
फाईल तस्विर विवाहेत्तर सम्बन्ध जोडेको भन्दै केन्याको एक जोडीलाई मैथुनरत अवस्थामै नगर परिक्रमा गराइएको छ । जोडी दुवै विवाहित थिए तर पतिपत्नी थिएनन् । नैरोबीस्थित एक्स्प्लोर इन होटलमा गई शारीरिक सम्बन्...
यस्तो पनि परम्परा जहाँ हातमा थुकेर पाहुनाको स्वागत गरिन्छ
एजेन्सी । यदि कुनै पनि मानिसले तपाइँको अगाडि थुक्छन भने पक्कै पनि तपाइँले उसलाई गाली गर्नुहुन्छ । कुनै पनि मानिसलाई घृणा व्यक्त गर्न थुक्ने गरिन्छ । तर संन्सारमा यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँ थुकेर स्वागत गरि...
बेडरुमको बत्ती निभाएको झोकमा लोग्ने विरुद्ध उजुरी
फाईल तस्विर एक इरानी महिलाले राति सुत्दा बेडरुमको बत्ती निभाएकै झोकमा लोग्नेविरुद्ध मुद्धा दायर गरेकी छिन् । सिरिन महरुसले अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्, जाबो बत्ती निभाउने कुरोमा त हाम...